[APK] Cheetah Mobile မှသဲလွန်စမရှိဘဲ QuickPick ကိုခံစားပါ Androidsis
[APK] Cheetah Mobile ၏ QuickPick ကိုထပ်မံသွင်ပြင်မရှိပဲခံစားပါ
အကယ်၍ သင်သည် QuickPic ၏ခြွင်းချက်မရှိအသုံးပြုသူဖြစ်ပြီးသင်သာ Cheetah Mobile မှအက်ပလီကေးရှင်းကိုဝယ်ယူသည့်အချိန်အထိ၊ များစွာသောအားဖြင့်အကောင်းဆုံးပြခန်း application တစ်ခုအဖြစ်လူအများကသတ်မှတ်ထားသည်၊ သင်ကံကောင်းပါစေ၊ ဒါက အသုံးပြုသူ iamelton ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် del XDA ဖိုရမ်ဒီနေ့ပြန်သွားနိုင်တယ် Cheetah Mobile မှသဲလွန်စမရှိဘဲ QuickPic ဗားရှင်းအဟောင်းကိုခံစားကြည့်ပါ မတော်တဆအဆင့်မြှင့်ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမွမ်းမံရန်စိတ်မဝင်စားသောအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များ၏စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အသိပေးချက်များမရရှိပဲ။
ငါဘယ်လိုပြောမလဲ QuickPic ဗားရှင်းအဟောင်းကကျွန်ုပ်တို့အားထပ်မံကမ်းလှမ်းသောလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုခံစားရန် ယခုအခါ apk တစ်ခုကိုရိုးရိုးလေး download လုပ်၍ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုပြင်ပတွင် Google Play သို့မဟုတ် Google Play စတိုးသို့ကျွန်ုပ်တို့ download ဆွဲလိမ့်မည်။ Cheetah Mobile app ၏ဗားရှင်းအသစ်ထဲသို့ထည့်သွင်းထားသောကြော်ငြာကွင်းနှင့်အမှိုက်သရိုက်များအားဖြတ်သန်းစရာမလိုဘဲ QuickPic ကိုမည်သို့ထပ်မံပျော်မွေ့နိုင်ပုံကိုသင်ဘာသိချင်ပါသနည်း? ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းကိုဖော်ပြထားသောလိုင်းများအောက်တွင်နှိပ်ပါ။ «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ရှုရန်».
သငျသညျအရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့ရှိသည်သွားကြသည်ပထမ ဦး ဆုံးအရာ, ကယုတ္တိနှင့်ယူဆရပုံဖြစ်ပါသည်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ သင်လျှောက်လွှာ၏တရားဝင်ဗားရှင်းရှိပါကဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး Cheetah Mobile မှပိုင်ဆိုင်သည်။ ငါမတိုင်မီရေတွက်လုံးဝက uninstall.
ဒီဟာကိုပြီးတာနဲ့သင်သာရှိသည်လိမ့်မယ် SignAligned ဗားရှင်းရှိ QuickPic application ကို download လုပ်ပါ သင်နှင့်အတူတရားဝင် XDA developer များချည်မှတိုက်ရိုက် download လုပ်ပါနိုင်ပါတယ် ဒီ link ကိုပဲနှိပ်ပါ.
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးပြီနှင့် apk တပ်ဆင်မှုမလုပ်မီ၊ သင်သည်သင်၏ Android ၏ဆက်တင်ကိုအပိုင်း၊ လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်နှင့်လုံခြုံရေး, နှင့် Google Market ပြင်ပရှိအပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ရွေးစရာကိုဖွင့်ပါ၊ ၎င်း၏အမည်ဖြင့်သင်ရှာနိုင်သည် မသိသောရင်းမြစ်များသို့မဟုတ်မသိသောဇစ်မြစ်.
၎င်းနှင့်သင်အောင်မြင်စွာ download လုပ်ထားသောသတိပေးချက်ကိုသင်နှိပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်လျှင်၎င်းကိုသင်အနှစ်သက်ဆုံး Android file explorer ဖြင့်လမ်းကြောင်းသို့သွားနိုင်သည်။ / ဒေါင်းလုပ် ဘယ်မှာရှာမလဲ QuickPic ဗားရှင်း 4.5.2 SignAligned apkသင် ၀ ယ်ပြီး Cheetah Mobile ကိုလုံးဝမဖျက်ဆီးခင်အထိနောက်ဆုံးပေါ်တရားဝင်ဖြစ်သည်။
apk ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လူအများစုအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်သမျှအားလုံးကိုခံစားနိုင်မှာပါ အချိန်အတော်ကြာ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံပြခန်း.
ဤပြုပြင်ထားသော QuickPic ဗားရှင်းသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်Amazon, Drive, Picassa, Flickr, Dropbox, Box နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င် Cloud Photo နှင့်ဗီဒီယိုသိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးပါ ၀ င်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များအတွက်အလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများကိုကျော်မသွားရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောလျင်မြန်သောဗားရှင်းအသစ်များရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးအကြောင်းကြားရန်လည်း၎င်းသည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဒီ post ရဲ့အစပိုင်းမှာသင့်ကိုချန်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာ၊ apk ကိုဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးရင်းအပြင် QuickPic ၏ထူးခြားချက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပြသမည်၎င်းသည် Cheetah Mobile မှကြော်ငြာနှင့်အမှိုက်မကင်းသည့်အပြင် Cloud သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ဒါကြောင့်ငါကသင်ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » [APK] Cheetah Mobile ၏ QuickPick ကိုထပ်မံသွင်ပြင်မရှိပဲခံစားပါ
Jose Manuel Martin ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ Installation ပြီးတာနဲ့ apk ကို update မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြပေမယ့်လည်း notification ကတော့ version 4.6 အထိရောက်နေပါပြီ။
José Manuel Martínကိုပြန်ပြောပါ
Samsung က Galaxy S12s ၁၂ သန်းကိုဖြန့်ချိဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပြီ
AGM, AGM X2, X2 Pro နှင့် X2 Max ဆိပ်ကမ်းများ၏အကွာအဝေးသစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါ်ထွက်လာသည်။